ဒါလေး ဖတ်ပြီးရင်တော့ mask တွေကို သေချာသိသွားလိမ့်မယ် | CosmeticMyanmar
Home » Article » ဒါလေး ဖတ်ပြီးရင်တော့ mask တွေကို သေချာသိသွားလိမ့်မယ်
ဒါလေး ဖတ်ပြီးရင်တော့ mask တွေကို သေချာသိသွားလိမ့်မယ်
ယောင်းတို့အတွက် အလှအပနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီပြောပြပေးနေတဲ့ cosmeticmyanamr ကနေ အခုလည်း ယောင်းတို့အတွက် ဟုသုတရစေမယ့် အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမိန်းကလေးတွေက မိတ်ကပ်လိမ်းတာသိပ်မလုပ်ကြတော့ဘဲ skincare ပိုင်းကိုပိုအလေးထားလာကြပါတယ်။ အသားရေလေးက ကြည်လင်ပြီးဝင်းပနေတာကိုပိုနှစ်သက်လကြပါတယ်။ အဲ့လို ဝင်းပစေလာမယ့် နည်းလမ်းတွေကလည်း အများကြီးရှိသလို brand တွေကလည်း အမျိုးအစားအစုံအလင်ရှိပါတယ်။ အဲ့ထဲကမှ မျက်နှာဖုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့ mask တွေအကြောင်းကို ဖောက်သည်ချချင်ပါတယ်။ Mask ဆိုတာနဲ့ အများစုက sheet mask တွေကိုပဲပြေးမြင်တတ်ကြပါတယ်။ ပါးလွှာတဲ့ cotton လေးတွေကို essence လိုအရည်လေးတွေထဲမှာထည့်ထားပြီး အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်အောင်လုပ်ထားတဲ့ ဟာလေးတွေကိုပဲ တွေးတတ်ကြပါတယ်။ ကဲ တခြားအမျိုးအစားတွေ ဖြစ်တဲ့ mask တွေလည်း ရှိသေးတာမို့ မသိသေးတဲ့ချစ်တို့အတွက် share ပေးလိုက်တယ်နော်။
နာမည်လေးကြားရုံနဲ့ ဘာလဲဆိုတာသိနေလောက်ပြီနော်။ ရွှံစေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ mask တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အရေပြားရဲ့အတွင်းပိုင်းထိသန့်စင်ပေးပါတယ်။ ပုံမှန်အသားရေတွေနဲ့ အဆီပြန်တဲ့အသားရေပိုင်ရှင်တွေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီ mask က ချွေးပေါက်တွေကို ပွင့်စေပြီး ချွေးပေါက်ထဲက အညစ်အကြေးတွေကိုပါသန့်စင်ပေးလို့ deep cleansing လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ကွက်တိပါပဲ။ အရေပြားရဲ့မကောင်းတဲ့အဆီတွေကိုစုပ်ယူသွားပေးလို့အရေပြားကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ သန့်စင်သွားမှာတော့အသေအချာပါပဲ။ Clay mask တွေကအရောင်မျိုးစုံရှိပြီး အာနိသင်ကတော့ တူတူတွေပါပဲ။ လိမ်းပြီးတာနဲ့ ၁၅ မိနစ်ကနေ မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပြီး ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးချလို့ရပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ နာမည်ပြောရုံနဲ့သိမယ်မထင်ဘူးနော်။ admin က ဒီလိုလေးပြောလိုက်ရင်တော့ အော် ဆိုပြီး သိသွားလိမ့်မယ်။ မျက်နှာကို မည်းမည်းအနှစ်ကြီးတွေလိမ်း ပြီးတာနဲ့ဆွဲခွာပစ်ရတဲ့ mask တွေပါ။ သူများတွေဆို ဆွဲခွာတဲ့အချိန်မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက် 😂😂 ဒီ mask တွေက အသားရေကို ယာယီတင်းရင်းသွားစေနိုင်ပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ နှာခေါင်းနားကဆားဝက်ခြံတွေက ဒီ mask နဲ့မှ အမျိုးပြုတ်မှာ 😂😂 သူကတော့ ခွာပြီးသွားရင် မျက်နှာအရေပြားကို ခြောက်သွေ့သွားစေလို့ moisturizer လေး ပြန်လိမ်းဖို့မမေ့နဲ့နော်။
cream mask တွေကတော့ အသားရေကိုနူးညံ့သွားအောင် လုပ်ပေးတဲ့အတွက် mask ပြင်းပြင်းကြီးတွေမသုံးချင်သူတွေအတွက်တော အဆင်ပြေပါတယ်။ Clay mask လို အရမ်းကြီး သန့်စင်ပေးတာ မဟုတ်ပေမယ့် အသားရေကိုအားဖြည့်ရာမှာ ဆရာတစ်ဆူပါ။ Cream mask တွေက တော့သုံးရတာလည်းလွယ်ပါတယ်။ မျက်နှာပေါ်မှာလိမ်းလိုက်ပြီး မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာတာနဲ့ ရေနဲ့ဆေးချလိုက်ရုံပါပဲ။
ကဲ အချစ်တော်လေးလာပါပြီ 😘😘 သုံးရတာအလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့mask တစ်ခုပါ။ အထုပ်လေးကိုဖောက် အထဲက mask လေးကိုကပ် ပြီးတာနဲ့ ခွာလိုက်ရုံပဲ။ ခရီးသွားရင်လည်းအဆင်ပြေ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အလွယ်တကူသုံးနိုင်တော့ အချစ်တို့ကြားမှာ ရေပန်းစားတာပေါ့။ သူ့မှာလည်း အသားရေအလိုက် အမျိုးအစားအများကြီးရှ်ိပါတယ်။ ကိုယ်က အသားရေကိုကြည်ချင်တာလား? ရေဓါတ်ပြည့်ချင်တာလား? တင်းရင်းချင်တာလား? အစုံရှိပါတယ်။ အထူးသတိထားရမှာလေး လာပါပြီ sheet mask တွေသုံးပြီးရင်ရေလုံးဝမဆေးချရပါဘူးနော်။ အဲ့အထဲကအရည်တွေက ရွှေတွေပါ 😁😁 ကပ်ပြီးရင် မျက်နှာလေးကို ပုတ်ပုတ်ပြီး ပြန်လိမ်းပေးပါ။ ပြီးရင် mask ကြီးကို အချိန်အကြာကြီးမတပ်ထားသင့်ပါဘူးနော်။ မျက်နှာကရေဓါတ်တွေကိုပြန်စုပ်ယူသွားလို့ပါ။
ဒါတွေကတော့ မီးဖိုချောင် mask လို့ခေါ်ရမလိုပါပဲ 😂😂 မီးဖိုချောင် ရော ရေခဲသေတ္တာထဲကပါ အသီးတွေကိုစုံလို့။ အိမ်မှာတင်ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ mask လေးဆိုတော့ ပိုက်ဆံလည်းချွေတာ အချိန်လည်းသက်သာ စွန်းမိုက်😎😎 ဒီ mask တွေကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သဘာပစ္စည်းလေးတွေကို လုပ်လို့ရတော့ အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးနော်။ Sensitive အသားရေပိုင်ရှင်တွေကတော့ မလိမ်းခင် အရင်လက်မှာဖြစ်ဖြစ် မေးရိုးနားမှာဖြစ်ဖြစ် စမ်းပြီးမှလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ နောက်ပိုင်းမှာခေတ်စားပြီးနာမည်ကြီးလာတဲ့ အမျိုးအစားပါ။ သူကတော့ ညဘက်ကို လိမ်းပြီးတာနဲ့ အိပ်လိုက်ရုံပဲ။ အလွယ်ကူဆုံး mask တစ်ခုပါ။ သူက cream type , gel type လိုမျိုးတွေ လာပြီး အသားထဲကိုစိမ့်ဝင်လွယ်ပါတယ်။ ဒါကတော့နောက်ပိုင်း ချစ်တို့ကြားနာမည်ကြီးနေတဲ့ mask လေးတစ်ခုပါ။
ကဲ ကဲ admin က ပိုက်ဆံကုန်ပေါက်များအောင်လုပ်မိသလိုဖြစ်သွားပြီလားဟင် ချစ်တို့သိအောင်လို့ သေချာလေးရှင်းပြလိုက်တာပါ။ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်ပြီးအဆင်ပြေတဲ့ mask လေးကို ရွေးချယ်ပြီး ပုံမှန်လေးထိန်းသိမ်းပေးနော်။ ပိုလှစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို mention ပြီး share ပေးလိုက်ပါဉီးနော်။
၁၅ မိနစ်တည်းနဲ့ ဝိုးကနဲဖြစ်သွားစေရမယ့် DIY hair mask လေး
BFF နဲ့ စပ်တူဝယ်လို့ရမယ့် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းလေးတွေ